Публичная бета-версия iOS 12 уже – HienaLouca
I-beta kawonkewonke ye-iOS 12 sele isele
Juni 26, 2018 Dianne Reeves KwiGadi
Emva kweentsuku ze-22 emva kweWWDC kunye nokukhishwa kwe-beta ye-iOS kubathuthukisi, i-Apple ikhupha i-beta kawonkewonke. Ukususela ngoku wonke umntu unokuthatha inxaxheba kwinkqubo yokuvavanya kwaye uzame iOS 12. Kufuneka kuphela ukuba ukhumbule ukuba le nguhlobo lwe-beta ye-iOS 12.
Ku-2015, i-Apple ihambe ngaphandle kwenguqu ye-beta evaliweyo ukulungiselela uvavanyo lwentlalo, kubo bonke amaqela anomdla. Njengomthetho, ngenxa yoluhlu olubanzi lwabasebenzisi, inkqubo kufuneka ihlambuluke xa ukukhanya kubona inguqu yokugqibela. Uluntu kufuneka luncede kule nto, engagunyazisi nje kuphela ukudluliselwa kwedatha echaphazelekayo ye-Apple, kodwa ikwazisa iingxelo eziphosakeleyo. Kwiintlobo ezininzi ze-beta, nangona kunjalo, ithuba lokuqhelana neemveliso ezintsha ze-Apple kwiinyanga eziliqela ngaphambi kokukhutshwa kwenguqu entsha. Ngoku kwakhona uvavanyo lwe-beta lukawonkewonke luye lwasinda kwi-iOS 12, eya kuba ne-premiere yayo ekwindla ngonyaka we-2018.
Ukusebenzisa iOS 12 kwi-iphone yakho okanye ipad, ungene ngemvume kwi-ID yakho ye-Apple kwiziko leprogram Iprogram ye-Apple Beta Software kwaye ukhupha iprofayili yakho kwisixhobo. Kwakhona ifumaneka ngu-beta version ye-TVOS 12 ye-Apple TV 4K. Kwaye okwangoku asikazanga ukusebenzisa i-MacOS Mojave, oko kukuthi, inkqubo entsha yeekhomputha. Inguqulo ye-beta ye-iOS 12 isekela yonke le iUrządzenia, eyayixhasa inkqubo ye-iOS 11, oko kukuthi, nge-iPhone 5 kunye nangaphezulu nakwi-iPad Mini 2 nangaphezulu.
Ngaphandle kokuvuleka kwenkqubo, kufuneka sikhumbule ukuba sisathetha ngenguqu ye-BETA, kwaye umsebenzisi uyifakela engozini yabo kunye nobungozi, ngokuqwalasela iingxaki ezinokwenzeka. Inkqubo engekho kuyo yonke imimiselo inokusebenza ngokucacileyo, kungekhona zonke izicelo ezikwazi ukusebenza, ezinye iziphene ziyakwenzeka, ibhetri inokusetyenziswa ngokugqithiseleyo. Okwangoku, nangona kunjalo, abantu bavavanya iOS 12 baye bayincoma ukuzinza kwezi nguqulo zakuqala zenkqubo yokusebenza.
Khuphela iprofayili ye-iOS 12 kwi-Apple Beta Software Software
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-344, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)
I-App Store ekugcineni kwisiPolish
Idiocy - Ndivuyiswa kukuba ndinokuchitha imali ngendlela entsha
Ulwazi olutsha malunga ne-iPhone X-iPhone X Plus kunye ne-iPhone 6,1 engabizi "- kuya kuba nemibala emitsha!
"U-Allegro" uceba ukufaka iintlawulo ze-Apple Pay
I-Allocacoc PowerCube i-омы обычной isela
AirPlay 2 - iphila. Uhlaziyo lwe-Sonos seluvele lukhona
Yiyiphi iTV e bhetele? ELondon, ngexesha le-HDTVTest TV Shootout 2018 yazama ukufumana impendulo
"Uthando lwamanqaku nguNewton" - ifilimu malunga nekhompuyuta encinci eluhlaza ... ... kunye nabantu abayithandayo
iindababetabeta iOS 12iOS 12I-iPhone / iPod / iPadbeta yoluntuTVOSTVOS 12
Post Previous:I-Crochet kunye ne-taxidermy kulabo bazondayo ukulimaza izilwanyana
Okulandelayo Post:Kunzima ukufumana umqhubi wekhompyutheni ye-Apple
Girlfriend of missing Connecticut woman’s… (33)
Feds seize 16.5 tons of cocaine from cargo ship MSC… (28)
Love Island: Joe and Elma are DUMPED from the villa (23)
Couple build a fantasy forest getaway in Norfolk woodland (20)
DR prosecutors reveal the name of the imprisoned man… (20)
NYC subway riders spontaneously start singing the… (19)
Ed Sheeran reveals the tracklist for his… (18)
Trump FIRES acting his acting Pentagon secretary… (15)
Boris Johnson puts Tories on a war footing as poll… (14)
Baths of Carcalla: Ancient oven heating water in… (13)